Tijaabi Dhamaan Qalabka Qalabka Adobe Shadow | Martech Zone
Tijaabi Qalabka oo dhan Si fudud ula Adobe Shadow
Saturday, April 28, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Haddii aad waligaa ku tijaabisay goob guud ahaan daalacashada mobilada iyo kaniiniga, waxay noqon kartaa mid xanuun badan iyo waqti qaadasho labadaba. Shirkadaha qaar waxay la yimaadeen qalab ay ugu ekeysiiyaan qalabka, laakiin waligeed isku mid kama aha tijaabinta qalabka laftiisa. Waan aqrinayay Majaladda Designer-ka maanta oo la ogaaday in Adobe la bilaabay Shadow, aalad ka caawisa naqshadeeyayaasha inay iswaafajiyaan oo ay la shaqeeyaan aaladaha waqtiga dhabta ah.
Jaleecada hore, kuma aanan aheyn mid ku qanacsan farsamada iswaafajinta… yaa daneynaya hadii aan gujin karo goob oo dhamaan aaladaha lammaanaha ah loo bedelay boggaas. Muuqaalka runtii weyn; si kastaba ha noqotee, waa awoodda si dhab ah loo eego loona maareeyo ilaha badeecad kasta si toos ah miiskaaga. Tani waxay awood u siin doontaa naqshadeeye kasta inuu si fudud u xalliyo oo u dhammaystiro naqshadooda.
Naqshadeeyayaasha ku daraya nashqad jawaab celin ah, tani si gaar ah ayey faa'iido u leedahay! Naqshadeynta jawaabta waxay hagaajineysaa cabbirka qalabkaaga halkii aad si fudud ugu tilmaami laheyd biraawsarka mawduuc kale ama qaabab kala duwan. Waxay caan ku yihiin warshadaha. Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad ka akhrisan kartaa maqaalka Magazine Magazine oo ku saabsan naqshadeynta websaydhada jawaabta leh.
Download Adobe Shadow ee Mac ama Windows. Waxay kaloo u baahan tahay Kordhinta Google Chrome iyo abka laxiriira midkasta oo qalabkaaga ah.
Tags: hooska adobebaaritaanka biraawsarkaipad browserbaaritaanka ipadbiraawsarka mobiladatijaabinta biraawsarka mobiladaNaqshad wax ku ool ahsafaritijaabada kiniinka
Saameynta dib u eegista internetka
Kordhinta Shabakadaha Bulshada ee Muuqaalka ah